माओवादी केन्द्रको बैठक सम्पन्न , के-के भयो निर्णय ?
ARCHIVE, POLITICS » माओवादी केन्द्रको बैठक सम्पन्न , के-के भयो निर्णय ?
ललितपुर – नेकपा (माओवादी केन्द्र) को केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारिक बैठक मंगलबार दिउँसो सम्पन्न भएको छ । माओबादी अध्यक्ष प्रचण्ड निवास खुमलटारमा भएको बैठकमा समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, पार्टी एकता र सरकार गठन लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
उक्त बैठकले आम जनताले अनुमोदन गरिसकेकाले पार्टी एकतालाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ । ‘एमाले अध्यक्ष ओली कमरेडको स्वास्थ्यमा आएको समस्याले छलफल अलि लम्बिएको हो । पार्टी एकता प्रक्रिया अगाडि जान्छ । पार्टी एकता र सरकार गठनबारे कुनै समस्या छैन । तपार्इंहरुले एकताको आश्चर्यजनक नतिजा पाउनु हुनेछ’ बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिँदै प्रवक्ता पम्फा भुसालले भनिन् ।